Wasiirka Waxbarashada XFS oo shir uga qeyb galay dalka Morocco | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Waxbarashada XFS oo shir uga qeyb galay dalka Morocco
Rabat (SNTV);- Wasiirka Wasaaradda Waxbarshada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare ayaa magaaladda Rabat ee dalka Morocco ka qeyb galay shir ay iskugu yimaadeen Wasiirada Waxbarashada dalalka ku jira hay’adda Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO).
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasiirada uu kulanka la qaatay uu kala hadlay sidii door muhiim ah uga qaadan lahayeen horumarinta waxbarashada Soomaaliya.
“Dhamaan Wasiirada Waxbarashada dalalka ku jira hay,adda Islaamic Educational scientific and Cultural Organization [ISESCO] waxaan ka wada hadalnay sidii kaalin mug leh uga qaadan lahayeen horumarinta waxbarashada Soomaaliya, waana isku afgarnay “ayuu yiri wasiirada waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre.
Wasaaradda Waxbarashada dalka ayaa dhawaan ku guuleystay inay hirgeliso manhajka cusub ee wasaaradda ay soo diyaarisay, iyadoo loo qeybiyay iskuulladii dhawaan ay la soo wareegtay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Cabdullaahi Goodax Barre Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka.
Previous articleGolaha Shacabka oo Akhrinta 1-aad marsiiyey Hindise Sharciyeedka Dhismaha Hay’adda dadka Naafada ah
Next articleAgaasimaha Guud ee Hay’adda NISA oo xilkii iska casilay